प्राण त्याग गर्न विष खाएकी सपनाको, संघर्षले भरिएको बलिउड यात्रा ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
प्राण त्याग गर्न विष खाएकी सपनाको, संघर्षले भरिएको बलिउड यात्रा !
हरियाणवी नर्तकी र बिग बोस ११ की प्रतिष्पर्धी सपना चौधरी आमा बनेकी छन् । शनिबार बेलुका रोहतकको एक अस्पतालमा उनले छोरालाई जन्म दिएकी हुन् । यो खबरले उनका फ्यान खुशी त छन्, तर उनले कहिले विवाह गरिन् र यो कुरा किन लुकाइन् भन्ने चासो फ्यानमाझ बढी छ ।
समाचार अनुसार सपनाले आफ्नो विवाहको गोपनियता राख्नुपर्ने पनि कारण छ । किनकी उनका पति वीर साहूको परिवारमा कोही सदस्यको निधन भएको थियो । त्यहीकारण दुवैले हाइ फ्रोफाइल विवाह नगरी सामान्य विवाह गर्न चाहेका थिए । त्यहीकारण दुवैले वर्षको शुरुमै अर्थात् जनवरीमै विवाह गरे ।
सपनाका पति वीर एक कलाकार हुन् । उनी गायक, संगीतकार, लेखक निर्माता र अभिनेता हुन् । वीरलाई ‘खलनायक’, ‘रसूक आला जाट’, ‘यार लेण्डलर्ड’ र ‘थड्डी– बड्डी’ जस्ता हरियाणी फिल्मबाट चिनिन्छ ।
सपनाको छवि जहिल्यै विवादित डान्सरका रुपमा रह्यो । सन् २०१६ मा उनी तब विवादमा आइन्, जब उनले विष खाएर आ त्मह त्या गर्ने प्रयास गरिन् । विष खाएपछि उनलाई गम्भीर अवस्थामा अस्पताल पुर्याइएको थियो । जहाँ उनले कैयौं दिन मृत्युसँग लड्दै जिन्दगीको यु द्ध जितिन् ।
सपनाले आफू विवादमा आएपछि आफ्नो जीवन अन्त्य गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् । सन् २०१६ को जनवरी १७ मा उनले गुडगाउँको चकरपुरको एक कार्यक्रममा ‘साँग बिगड्ग्या जाताँ का’ गीत गाएकी थिइन् । त्यसपछि जुलाई २०१६ मा सतपाल तम्बर नामका एक व्यक्तिले यो गीतबाट दुःखी भएर सपनाका विरुद्ध एससी–एसटी एक्ट अनुसार एफआईआर दर्ता गराएका थिए । जसकारण सपना तनावग्रस्त बनेकी थिइन् । सन् २०१६ को सेप्टेम्बर ४ मा वि ष सेवन गर्नु अघि आफ्नो सुसा इड नोटमा यो कुरा उल्लेख गरेकी थिइन् ।
मृत्युबाट बाहिर निस्किएपछि जब सपना बिग बोस ११ मा प्रतिष्पर्धीका रुपमा देखिइन् । त्यही बेला सलमान खानले उनलाई आ त्मह त्या प्रयासको बारे सोध्दै ‘जिन्दगीबाट एकपटक तपाईं धेरै चिन्तित हुनुभएको थियो’ भनेका थिए । सपनाले सलमानलाई जबाफ फर्काउदै ‘हो यस्तै भएको थियो । फेरि मैले वि ष सेवन गरेको थिएँ । त्यो समयमा म मानिसलाई सुन्दथे, अब मैले मानिसको कुरामा ध्यान दिन थालेको छु’ भनेकी थिइन् ।
सेप्टेम्बर २५, १९९० मा रोहतक हरियाणामा जन्मिएकी सपनाको जीवन निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । उनको शिक्षा पनि रोकिएको थियो । पिता निजी कम्पनीका कर्मचारी थिए । जसको सन् २००२ मा मृत्यु भयो । पिताको मृत्युपछि सपनाले परिवार सम्हाल्ने जिम्मेवारी लिइन् र १२ वर्षको उमेरमा नृत्य गर्न शुरु गरिन् । सपनाको गीत ‘सोलिड बडी रे’ यति धेरै हिट भयो कि उनी हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पन्जाबको चर्चित डान्सर बनिन् ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, जेठ १५ २०७८ १३:५७:४१